Mgbakwunye Kuki zuru oke bụ ihe ọhụrụ nke Firefox maka gam akporo | Gam akporosis
Mozilla dị njikere ịbụ otu n'ime ndị na-alụ ọgụ iji data anyị ihe ohuru nke biara na ihe nchọgharị gam akporo gi: Nchekwa Kuki zuru ezu. Ihe ohuru di na Firefox Strict Mode.
Ka anyị kwuo Total Kuki Nchedo ana achi achi webusaiti ọ bụla na-enweta nke ya “Kuki kuki”, nke a na-atụ anya iji kuki iji soro usoro anyị na-eme nchọgharị site na weebụsaịtị gaa na nke ọzọ.
1 Kedu ihe nchọgharị ndị ọzọ na-eji kuki
2 Kedu ka Nchịkọta Kuki zuru ezu na-arụ ọrụ?
3 Naanị otu maka ojiji nke kuki
Kedu ihe nchọgharị ndị ọzọ na-eji kuki
Naanị ụbọchị 5 gara aga, Mozilla kwupụtara ọbịbịa nke Firefox na Nchekwa Kuki zuru ezu, a ihe ịga nke ọma n'ihe banyere nzuzo ejikọtara na iji Ọnọdụ siri ike nke ihe nchọgharị a nke anyị nwere maka gam akporo.
N'ezie ihe Nchịkọta Kuki Kukpọ zuru oke bụ maka "igbochi" kuki na weebụsaịtị ebe e kere ha, nke na-egbochi ụlọ ọrụ iji kuki ndị ahụ ka ha wee nwee ike soro weebụsaịtị ndị anyị gara.
Anyị agaghịkwa ekwu ihe ọ bụla karia ihe oma banyere kuki, ebe ọ bụ na anyị nọ ebe ahụ maka ihe, mana ọ bụ eziokwu na n'ihe gbasara ngwangwa nke data anyị nwere nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ "dị egwu". Karịsịa, ọ ka dị ize ndụ n'ihi na imirikiti ndị na-eme nchọgharị na-ekwe ka e kesaa kuki ndị a n'etiti weebụsaịtị dị iche iche, n'ụzọ dị otú a weebụsaịtị ndị ahụ nwere ike ịkpado igodo anyị ka anyị "mara" ebe ị na-aga yana ebe ị si.
Ọ dị ka a ga-asị na ha tinye gị geolocator gị mgbe ị gara ileta ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ahụ nwere ike ịmara ole ole ị gara n'okporo ámá ị gara na ihe ị mechara.
Na dika, ụdị kuki ndị a nwere ike ịmepụta profaịlụ pụrụ iche nke ojiji anyị na ofntanetị ịkọrọ ndị ụlọ ọrụ ahụ ị ga-ekerịta data ahụ na ụlọ ọrụ ga-ahụ maka izipu anyị mgbasa ozi ziri ezi maka ọdịmma anyị, ụtọ, mkpali, ọchịchọ na ndị ọzọ; Onye na-agabeghị okwu na onye ọrụ ibe m na ekwentị ma ọ bụ chọọ ihe, na ụbọchị ole na ole ebe ọ bụla ọ gara, mgbasa ozi na-apụta na Instagram, weebụ ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ.
Kedu ka Nchịkọta Kuki zuru ezu na-arụ ọrụ?
Tupu ịkọwa otu Total Cookie Protection na-arụ ọrụ, ị ga-amara nke ahụ na 2019, Firefox webatara Nchedo Nsochi Na-enweghị Mmetụta, iji gbochie kuki sitere na ụlọ ọrụ ndị ama ama na ndị ọrụ Mozilla na Disconnect.
Mana ọ dị ka Mozilla akwụsịghị ebe ahụ naanị wee chọọ ịga n'ihu iji hụ na ọ nweghị ụlọ ọrụ nwere ike soro anyị mgbe anyị banyere na Ọnọdụ ahụ na-agagharị na Firefox maka gam akporo.
Total Kuki Nchedo na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otú ahụ nke na-edozi "ite kuki" dị iche maka weebụsaịtị ọ bụla ị gara; nke bu akpa kuki. N'oge ọ bụla, weebụsaịtị ọ bụla, ma ọ bụ ndị ọzọ agbakwunyere n'otu, na-etinye kuki na ihe nchọgharị gị. Kuki ahụ dị na “ite kuki” ekenye na weebụsaịtị ahụ., yabụ enweghị ike ịkekọrịta ya na weebụsaịtị ọzọ.
Naanị otu maka ojiji nke kuki
Mgbakwunye Kuki niile na-ewepu maka iji kuki na ọ bụ mgbe o metụtara nbanye ka anyị ga-eme web ji nzere anyị. Mgbe ọ "ghotara" na ebumnuche gị bụ iji onye na-eweta ọrụ, ọ ga-enye ya ikikere dị mkpa iji kuki "obe", maka otu nke ị na-eleta.
Ka ọ were ahụmahụ karịrị zuru okè na-enye nchebe dị oke elu na nzuzo nke data anyị yana na anyị anaghị enwe ike "ịbanye" na weebụsaịtị dịka anyị ga-anọ n'ọnọdụ nkịtị na Firefox maka gam akporo.
Na mgbakwunye na Supercookie Nchedo ekwuputara n'ọnwa gara aga, na Total Kuki Nchedo arụ ọrụ Mozilla nwere ike igbochi gị iji ihe nchọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ na-enwe ike ịkpado gị; ugbu a Firefox Proton na-echere anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kedu ihe bụ Kuki Nchekwa Kuki, nnukwu ihe ọhụụ nke Firefox maka gam akporo